Cod bixinta Deegaanada Maamulka Soomaaliland oo Heer Gaba gaba ah Maraysa -
Waxaa inta badan laga Codeeyay deegaanada Mamaulka Soomaaliland ka dib markii xalay ay wada seexeen Shacabka inta ugu badan Goobaha loo asteeyay in ay ka codeeyaan.
in kabadan 700 oo goobood ayaana laga Codbixiyay waxaana Codbixinta Bilaabatay 7:00 subaxnimo waxaana ujeedka uu ahaa in la soo gaba gabeeyo 6: Maqrimnimo laakiin goobaha qaar oo aad loogu daahay iyo Safafka oo dhaa dheer awgeed waxaa soora gal ah in waqti kordhin loo sameeyo.
Musharaxiinta lixda ah oo kala ah Faysal Cali xuseen Waraabe,Cabdiraxmaan Maxamed cabdulaahi Ciro iyo Muuse biixi Cabdi waxay u tartamayaan Madaxweyne Halka sedaxda kale iyana ay u tartamayaan madaxweyne ku xigeen.
Sedaxda utartamaysa Madaxweyne waxay ka codeeyeen Madaxtooyada goob aan ka fogeyn halka Madaxweyne ku xigeen musharaxiinta u tartameysa iyana ay codkooda ka dhiibteen Boorama.
Guud ahaan deegaanada ay ka socoto Codbixinta ayaa ku socota Jawi wanaagsan lamana soo waranin wax rabshado ah.
dhinaca kale waxaa halkaas jooga kor meeriyaal Caalami ah oo wadamada caalamka qaarkood ka socda.
Waxaa Daqiiqadaha soo socda lafilayaa in Gudiga ay ku dhawaaqaan in la soo Gaba Gabeeyay Codbixinta Madaxtanimada Maamulka Soomaaliland.
Related Items:Cod bixinta Deegaanada Maamulka Soomaalialand oo Heer Gaba gaba ah maraya, Featured